Madaxweyne Xasan: Khilaafka Taleex waa in loo raadiyo xal nabadeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa ku baaqay in si nabad ah xal loogu raadiyo khilaafka ka jira degmada Taleex ee gobolka Sool, halkaasoo ay shalay la wareegeen ciidamada maamulka Somaliland.
“Wadahadal, dib u heshiisiin iyo nabadeyn waa in lagu dhameeyaa khilaafka Taleex, Dowladda Federaalka Soomaaliya waxey diyaar u tahay inay dhammaan dhinacyada ay quseyso kala shaqeeyso xal u helidda khilaafka oo aan shacabka u naxno una horseedno dib u heshiisiin waarta oo soo afjarta dhammaan khilaafaadka soo jireenka ah ee degaankaas” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh oo soo saaray warsaxaafdeed kooban.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu ka walaacsan yahay xaaladda ka soo cusboonaatay magaalada Taleex, islamarkaana loo baahanyahay in laga wada shaqeeyo sidii shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan ay khilaafkooda iyo kala aragti duwanaanshahooda loogu xallin lahaa si nabad ah.
Madaxweynaha ayaa sheegay inuu ka xunyahay in la daadiyo dhiig cusub, wuxuuna soo jeediyey in ugu yaaraan xaaladda lagu soo celiyo sidii ay horay u ahaan jirtay.
“Aad iyo aad bey noo dhibeysaa inaan arango dhiig hor leh oo ku daata si aan micno laheyn. Xaaladda waa in la dejiyaa oo ugu yaraan lagu soo celiyaa sidii ay aheyd maalmo ka hor inta aysan collaadaha cusub bilaaban si wadahalka iyo nabadeynta fursad loo siiyo” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha ayaa xusay in mowqifka dowladda Soomaaliya uu yahay in dad deegaanka loo daayo iney aayahooda ka tashadaan.
“Siyaasadda Dowladda ayaa ah in dadka deegaanka ay xaq u leeyihiin inay aayahooda ka tashadaan si loo gaaro marxalad aan caalamka kula tartami karno, isla markaana aan u istaagi karno sharafka iyo karaamada muwaadiniinta Soomaaliyeed. Taasna waxey ku imaan kartaa oo kaliya annagoo la nimaada biseyl siyaasadeed, isu dulqaadasho iyo is tixgelin ku wajahan kala danbeyn iyo ilaalinta amniga muwaaddinka” ayuu sidoo kale yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Ciidamada Somaliland ayaa shalay qabsaday degmada Taleex ee gobolka Sool, halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka amarqaata maamulka Khaatumo, waxaana dhankooda deegaankaas sheeganayey maamulka Puntland oo u goodiyey Somaliland.
Xoghayaha Britain u qaabilsan Afrika oo Hargeysa kula kulmay madaxweynaha maamulka Somaliland